Madaxweyne iyo hogaamiye mucaarad: ''Tareen ayay ku kulmeen xal masiiri ahna ku gaareen'' - BBC News Somali
Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo iyo hogaamiyaha mucaaradka Prabowo Subianto ayaa markii ugu horreysay tareen gudihiis ku kulamay tan iyo markii ay ku tartameen doorasho muran bada dhalisay taasi oo dibedbaxyo sababtay.
Mr Widodo ayaa bishii April dib loo doortay balse Prabowo Subianto ayaa ku eedeeyay in uu doorashada ku shubtay taas oo sababtay in taageerayaasha mucaaradka ay dibadbaxyo khalalaase wato dhigaan iyadoo ay sagaal qof naftooda ku waayeen.
Si kastaba maxkamadda dastuurka ee Indonesia ayaa bishii la soo dhaafay go'aamisay in Mr Widodo si cadaalad ah lagu doortay.
Sabtidii ayayna ka wada hadleen khilaafka u dhaxeeya iyo ku kulmay daah-furka habka cusub ee tareenada ee dalkaasi.
Dadka qaar ayaa Prabowo weydiyay sabata uu Jokowi ugu hambalyeeyn waayay? ''Aniga anshaxa ayaan garanayaa oo waxaan rabay in aan si gaar ah ugu hambalyeeyo'', ayuu yiri hogaamiyaha mucaaradka, isagoo garab taagan madaxweynaha.
''Shaqada madaxweynaha waa in uu dadkiisa u shaqeeya, marka dhibaatooyinka uu wajahayo way badan yihiin, diyaar ayaana u ahay in aan caawiyo,'' ayuu intaasi raaciyay.
Madaxweynaha ayaa sheegay uu la xiriiray hogaamiyaha mucaaradka uuna ku casumay in uu ka soo qeyb galo furitaanka habka cusub ee tareenka ee magaala madaxda dalkaasi.
'' Waan ku faraxsanahay in aan la kulmo Prabowo Subianto,, marka waxaan rajeynayaa in taageerayaasheena ay waddadeena raaci doonaan, sabatoo ah dhammaanteen waxaan nahay shucuub hal dal wadaaga,'' ayuu yiri madaxweyne Joko Widodo.
Protests over the election results in May turned violent
''Aan isku duub-naano inagoo hal dal mataleyno, sababtoo ah tartanka aanu kula jirno waddamada kale ee caalamka wuu sii adkaanaya marka sidaa darteen waxaan u baahannahay in aan dhinac ka soo wada jeedsano si aan dalkeena u hormarino.'' ayuu intaasi ku sii daray Widodo.